ZBN Psa နိုက်ထရိုဂျင်ချမှတ်ခြင်း device ကို - တရုတ်ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲနပစ္စည်း
အလုပ်လုပ်နိယာမ: Psa နိုက်ထရိုဂျင်ချမှတ်ခြင်း device ကိုနိုက်ထရိုဂျင်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ဖိအားလွှဲထိစိမ့် (Psa) ၏မူအရ အသုံးပြု. စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ်ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြို့သောဖိအားအရ, ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏လေထုထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်များအသုံးပြုခြင်းကာဗွန်အတွက်မော်လီကျူးဆန်ခါပိုကြီးဖြစ်ပါသည်, ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်မြန်နှုန်းအောက်စီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်သည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်, အောက်စီဂျင်အကြီးပမာဏကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်သည်, t အတွက်နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူး၏သန့်စင် ...
Psa နိုက်ထရိုဂျင်ချမှတ်ခြင်း device ကိုနိုက်ထရိုဂျင်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ဖိအားလွှဲထိစိမ့် (Psa) ၏မူအရ အသုံးပြု. စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ်ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြို့သောဖိအားအရ, ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏လေထုထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်များအသုံးပြုခြင်းကာဗွန်အတွက်မော်လီကျူးဆန်ခါပိုကြီးဖြစ်ပါသည်, ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်မြန်နှုန်းအောက်စီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်သည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်, အောက်စီဂျင်အကြီးပမာဏကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်သည်, ဓာတ်ငွေ့အဆင့်နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူး, အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ခွဲခြာ၏သန့်စင်; ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါအောက်စီဂျင်ထိစိမ့်စွမ်းရည်ဖိအားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတူကွဲပြားအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်, စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့, ပြန်သုံးဖို့ပြန်လုပ်ရန်, ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်အောက်စီဂျင်, ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏ desorption နိုင်ပါတယ်။
နိုက်ထရိုဂျင်ထိစိမ့်, အ desorption မျှော်စင်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး, သံသရာ, အရည်အသွေးမြင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်ရန် PLC Program ကိုထိန်းချုပ်ရေးမျှော်စင်၏နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတာဝါတိုင်ထိစိမ့်မျှော်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အသုံးပြုခြင်း။
နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ:
ယင်းချိန်ကိုက်၏, အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ခိုင်မာတဲ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်, လျင်မြန်သော, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အထွက်နှုန်းနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်;
Pry ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း, ပေါင်းစည်းမှု, တပ်ဆင်ခြင်း, အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေး, အသေးစားအာကာသ;
, Poly ထူးခြားတဲ့ပျားလပို့ကိုပေါင်းစပ်အိပ်ရာ type ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိပျံ့နှံ့ technique ကို, လေလက်ရှိမော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်ထိရောက်မှုကြောင်းသေချာစေရန်, စဉ်ဆက်မပြတ်ပါ၏
အာမခံချက်ပေး pneumatic ဆို့ရှင်၏ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်, ပစ္စည်းကိရိယာများစစ်ဆင်ရေးချမှတ်;
ချောထုတ်ကုန်နိုက်ထရိုဂျင်၏အရည်အသွေးသေချာဖို့အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးနိုက်ထရိုဂျင်အလိုအလျှောက် emptying devices များ,
စသည်တို့ကို optional ထိတွေ့မျက်နှာပြင်လူစက် interface ကို, သပ္ပါယ်စွမ်းအင်ချွေတာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်နှင်းအချက်ထောက်လှမ်း, DCS ဆက်သွယ်ရေး,
နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု: ~ 3000 1 nm3 / h
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်: 95% ~ 99,999%
နိုက်ထရိုဂျင်ဖိအား: 0.1 ~ 0.8 MPa (ချိန်ညှိ)
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင်းအချက်: 40 ℃ ~ 70 ℃မှ
ယခင်: ZBO Psa အောက်စီဂျင် Generating ကိရိယာများ
နောက်တစ်ခု: ZBO အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံလောင်ကျွမ်းကိရိယာများ
Air ကိုအောက်ဆီဂျင် Separation စက်ရုံ
Air လေကြောင်းလိုင်း ခွဲခြာပစ္စည်းကိရိယာ
centrifugal Airflow ဆန်ခါ Separation ပစ္စည်းကိရိယာ
Air ကိုခှဲစက်ရုံသည် Cryogenic ပစ္စည်းကိရိယာ
Psa Air ကိုခှဲစက်ရုံ
Solid-အရည် Separation အရည်ဓါတ်ငွေ့ခြား
ZAS မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရေနံ-ရေ separator
ZBO Psa အောက်စီဂျင် Generating ကိရိယာများ